OnePlus7Pro သည်ခံနိုင်ရည်နှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုခက်ခဲသောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သည် Androidsis
တရုတ်အခြေစိုက် OnePlus မှအထင်ကရစမတ်ဖုန်း၊7Pro ကို OnePlus, နာရီအနည်းငယ်အကြာအတူတကွဖြန့်ချိခဲ့သည် OnePlus 7, နှင့် JerryRigEverything ၏ Zack သည်ကိရိယာ၏ကြာရှည်ခံမှုကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်ကျယ်ပြန့်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းသည်ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားသော်လည်းအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများနှင့်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည့်စမ်းသပ်မှုကပြောပြသည် ဖုန်းသည်၎င်းအားအသုံးပြုထားသည့်ကြာရှည်ခံမှုစမ်းသပ်မှုကိုမည်မျှနှင့်မည်မျှကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ကြည့်ကြရအောင်!
ဤအရာသည် OnePlus7Pro သည် JerryRigEverything ၏စမ်းသပ်မှုများကိုခံရပ်တည်ပုံဖြစ်သည်
ဒါဟာအားလုံးခြစ်ရာစမ်းသပ်မှုနှင့်စတင်သည်, ငါတို့မြင်သည်အတိုင်း, \_ t အထင်ကရမြင်ကွင်းသည် Mohs ၏မာကျောမှုအတိုင်းအတာအပေါ်အဆင့် ၆ တွင်စတင်ခြစ်ရာဖြစ်သည်Corning ၏ Gorilla Glass6မှကာကွယ်ပေးမှုကြောင့်ဤကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာအထိဖြစ်လာသည်။ အဆင့်7မှာ, သင်ပိုမိုနက်ရှိုင်း Ruts ကြည့်ရှုရန်စတင်နိုင်ပါသည်။
Pop-up ရှေ့ကင်မရာကိုအလွယ်တကူမခြစ်နိုင်အောင်ဖန်သားဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်သို့သော်၎င်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးခြစ်ရာများပိုမိုကျရောက်နိုင်သည်။ ဖုန်းရဲ့ဘေးဘက်မှာ SIM ကဒ်အကန့်၊ အသံအတိုးအကျယ်၊ rocker၊ ပါဝါခလုတ်နှင့်အချက်ပေးဆလိုက်ဒါတို့ပါဝင်သည်။
OnePlus7Pro ၏အနောက်ဘက်မျက်နှာပြင်တွင် Gorilla Glass5ပါရှိသည်။ ၎င်းကိုခြစ်ရာများမှကာကွယ်ရန်s ။ OnePlus တံဆိပ်နှင့်စာလုံးအမှတ်အသားကိုအလွယ်တကူဖယ်ရှား။ မရနိုင်အောင်ဖန်ခွက်အောက်၌ထားရှိသည်။
အခုဆိုရင် litmus test ကိုရောက်တော့စမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကအထင်ကြီးလေးစားစွာနဲ့ထွက်လာတယ်။ မပြဘူး တစ်မိနစ်ခန့်အကြာတွင်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုထားသောပွင့်လင်းသောမီးလျှံရှိခြင်းနောက်မှသေဆုံးသော pixels မရှိပါ။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်အခြား AMOLED panel များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စက္ကန့် ၂၀ ခန့်သာကြာပြီး pixel ပျက်စီးခြင်းမဖြစ်ပေါ်မှီတိုင်အောင်ဖြစ်သည်။
Abkruct with 7K ရှိ OnePlus4wallpapers ကိုရယူပါ
မျက်နှာပြင်၏ထိပ်ရှိဖန်ခွက် Level7Mohs ခြစ်ခြင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားလျှင်ပင် OnePlus7Pro ၏ In-screen fingerprint sensor အလုပ်လုပ်နေသည်။ flex စမ်းသပ်မှုတွင်ဖုန်းသည်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်, မည်သည့်ခွဲသို့မဟုတ်ခြံဖေါ်ပြခြင်းမရှိဘဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » OnePlus7Pro သည် JerryRigEverything ၏ခိုင်မာသောခံနိုင်ရည်နှင့်ကြာရှည်ခံမှုစမ်းသပ်မှုများကိုခံယူသည်
Google Translate သည်ကင်မရာအသုံးစနစ်တွင်အလိုအလျောက်ဘာသာစကားရှာဖွေမှုကိုအသုံးပြုသည်